Avotra Any Alemaina, Mianatra Mitsiky Indray Ity Mpitsoa-ponenana Syriana Ity. · Global Voices teny Malagasy
Avotra Any Alemaina, Mianatra Mitsiky Indray Ity Mpitsoa-ponenana Syriana Ity.
Voadika ny 04 Jolay 2016 9:26 GMT
Vakio amin'ny teny русский, عربي, Français, Ελληνικά, Español, Deutsch, Italiano, English
Maro no voasoratra momba ireo mpitsoa-ponenana nandritra ny roa taona lasa. Fa mahalana no andrenesantsika ireo mpitsoa-ponenana izy tenany afa-tsy aminà ampaham-baovao maro. Namoaka an-tsoratra ny tantaran'ireo tanora Siriana dimy izay nandray fanapahankevitra sarotra handao ny tranony — ary hamakivaky làlana mampatahotra ivelan'ny firenena ho any Tiorkia, Gresy ary mamakivaky an'i Eoropa Atsimo ny GlobalPost, fikambanana iraisam-pirenena mpikirakira vaovao ary ao anatin'ny vondrona PRI.
Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 31 May 2016 ity tantaran'i Hassan Jamous, 24 taona, ity ary navoaka indray rehefa nahazo alàlana.
Oeeeee!! Tonga eto Alemaina ihany aho ny farany. “Mivoaha ny fiarabe,” hoy ny fikiakiakan'ilay mpampiditra an-tsokosoko. ” Eto Munich isika izao.”
Tsy nampaninona ahy loatra ny hoe aiza izahay izao. Te-hivoaka haingana tao anatin'ilay fiarabe fitondrana biby fotsiny aho. Nisento lalina aho dia nijery ny manodidina. ” Tena eto Alemaina tokoa ve izahay ?” nanontany tena aho. Maraina ny andro tamin'izay. Tsy nahita olona aho. Nanomboka nisolo akanjo malaky ireo Siriana 20 niaraka tamiko tao anatin'ilay fiarabe. Tsy nanana akanjo tsara aho. Jean maloto sy lobaka ratsy no nananako. Tsy fantatro izay hatao. Niandry ireo mpitandro filaminana hisambotra anay amin'ny fotoana rehetra aho.
Tamin'izay fotoana izay, niezaka nisitraka ny fahanginana sy ny rivotra madio fotsiny aho taorian'ilay dia lavabe sy nanorisory. Tsy fantatro ireo mpitsoa-ponenana hafa niaraka tamiko. Tsy nihaona izahay raha tsy tany an-tranon'ilay mpampiditra antsokosoko tany Budapest. ” Miandrasa 15mn avy eo dia mandehana miala eto” hoy ny mpitondra ilay fiarabe taminay. Avy eo dia lasa izy. Niandry izahay. Ary dia nanapaka hevitra hitady izay mpitandro filaminana voalohany mety ho hitako teny an-dàlana aho.
“Tsy any an-tranoko intsony aho. Tsy mipetraka ao an-dakozia miaraka amin'ny fianakaviako, miandry ny reniko hikarakara sakafo matsiro aho. Izany izao no fiainako vonjimaika.”
Avy eo nahatsikaritra lehilahy roa sy ankizilahy kely iray nijery ahy aho. Siriana avy any Damaskosy koa ireo. ” Avy aiza ianao?” hoy ny fanontanian'ilay zokiny indrindra. “Damaskosy,” hoy aho. “Miteny Anglisy ve ianao ?” tsy dia mahay loatra aho hoy aho. “Andeha ho any an-tanàna atao hoe Saarbücken izahay. Voalaza fa tena mahafinaritra ny olona any ary vetivety dia vita ny taratasy momba ny mpitsoa-ponenana.” Nahoana no tsy mankany ? hoy aho nieritreritra.
Nanakana fiarakaretsaka izahay ary niteny taminy tamin'ny teny Anglisy fa te-ho any amin'ny toeram-piantsonan'ny fiara fitaterana. “Tsy misy olana” hoy izy. ” Fa manam-bola ve ianareo ?” nihomehy aho namaly azy, “Eny, manana izahay.” Toy ny fantany fa ora voalohany ho anay ao Alemaina izao. Angamba noho ny volon-koditray. Ao anaty fiarakaretsaka, nanomboka nijery ilay tany mahafinaritra avy eo amin'ny varavarankely aho. “Afaka manangana hoaviko eto ve aho ?” hoy aho nanontany tena. Azoko antsoina hoe tanindrazako faharoa ve ity tany ity ? Notapahan'ny feon'ilay mpitondra firakaretsaka ny eritreritro. “Tonga isika” hoy izy.
Nandeha tamin'ilay fiara fitaterana voalohany ho any Saarbrücken izahay. Naharitra adiny enina ny teny ambony fiara. Laniko tamin'ny fatoriana toy ny zazakely ny ankamaroany. Tena noana sy valaka aho. Nisy tobinà mpitsoa-ponenana tany Saarbrüken. Nahita olona samy hafa firenena marobe aho tao amin'ilay toby, fa tsy Siriana ihany. Betsaka ny filaharana ary betsaka ny tabataba. Nomena sakafo aho ary nentina tany amin'ny efitra iray izahay. Nohaniko haingana ilay sakafo dia natory aho.
Dikasarin'ny Làlana any Syria nalain'i Hassan tamin'ny fahitalavitra. Tany amin'ny manodidina an'i Damaskosy, tanàna antsoina hoe Darayya, misy ny ady mahery vaika eo amin'ny fitondrana Siriana sy ny tafiky ny mpihoko no nitoeran'i Hassan. (Hassan Jamous)
Tena mafy tamiko ny andro voalohany tao Saarbrücken. Tsy maintsy ilaharako ny sakafo sy taratasy. Nefa tsy maintsy miatrika izany aho. Tsy any an-tranoko intsony aho. Tsy mipetraka ao an-dakoziako miaraka amin'ny fianakaviako, miandry ny reniko mikarakara sakafo matsiro aho. Izany izao no fiainako vonjimaika. Afaka herinandro nafindra toby hafa aho. Tsy fantatro ny antony. Nanontany ilay mpikarakara aho ary novaliany tamim-pahatsorana fa ara-dalàna izany eto Alemaina. Hafindra any amin'ny toby hafa any Treir ianao, hoy izy tamiko. Tena mahafatifaty ny fitsikiny.
Nomeny tapakilanà fiarandàlamby sy sarintany izahay. Nandritra ny fandehanana dia nijery ny endrik'ireo Alemàna tao anaty fiarandàlamby aho ary nanontany tena, ” Tena METY ve ny eto ?” Sadaikatra aho. Vaovao ny zavatra rehetra ary tsapako ho malemy aho. Kely kokoa ny tobin'i Treir ary eo ho eo amin'ny ampahadimin'ny mpitsoa-ponenana tary amin'ilay toby iray tary no zakany. Tsy misy toerana hatoriana. Teny an-dàlantsara no nandaninay ny alinay voalohany. Avy eo nafindra indray izahay. Feno ny toerana tao amin'io toby io. Reraky ny mandeha aho. Te-hijanona amin'ny toerana iray aho. Nahafinaritra ny fikarakarana anay. Tsikitsiky no hitanao hatraiza hatraiza. Tena asa sarotra no ataony. Noheveriko fa hankahala anay ny olona aty.
Tsy maintsy niandry ela be foana aho rehefa handeha fiara fitaterana, na haka sakafo, na handeha handro. Tsy afaka manana namana raikitra ao amin'ny toby. Tsy fantatra ny hoe iza no handeha na iza no hijanona. Miandry ny hafindra efitra hafa fotsiny ianao raha manam-bintana.
Zatra ny fiainana tao amin'ny toby aho ny andro faha-28 naha-tao Alemaina ahy. Nanana paikady hahazoana sakafo aho. Niezaka ny manadino sy mandroso hatrany ny olona. Nanao fanatanjahantena mba hialana voly ry zareo. Heveriko fa tena faly ny ankizikely. Nilalao ry zareo mandritra ny andro, nifanenjika sy niady ny ankizy. Tranga izay tsy hita intsony any Syria izany. Niaraka natory tamin'ny olona 200 aho tao anaty tranolay. Sarotra ny fahitana torimaso. Misy foana ireo izay mitabataba — zaza mitomany na mamo mikàkakàka. Tsy fiainana tonga lafatra izany nefa tokony haharitra. Voavonjy farafaharatsiny.
Nafindra tany aminà trano kely tany amin'ny tanàna atao hoe Stadecken-Elsheim ihany aho ny farany. Tsy nampaninona ahy ny momba ny toerana, te-hiala ny toby fotsiny aho. Efa nieritreritra efitra tsara sy angamba hahandro irery ny sakafoko tsara aho. Ireo no nofinofiko tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny andron'ny famindràna, nifoha tamin'ny 6 maraina aho, mbà voalohany hasambarako tao anatin'ny volana maro. Natao veloma tamin'ny fomba tsotra izahay tao amin'ny toby. Tonga ny fiara fitaterana ary dia nanao veloma an'eritreritra ny toby aho, ary manantena fa tsy hiverina ao intsony.
Hassan mijoro manoloana ilay solaitrabe fotsy mandritra ny fianarana teny Alemàna ao amin'ny tanànany vaovao. Credit: Hassan Jamous
Nentina tany amin'ny lapan'ny tanàna mba horaisina anarana aloha izahay izay hifindra eto Stadecken-Elsheim. Tena nahafinaritra sy mbola nitsikitsiky ihany ireo mpiasa. Nolazainy tamin'ny teny anglisy fa olona enina no hipetraka ao amin'ilay trano mandra-pahazonay ny karatra ahafahanay monina mandritra ny telo taona. METY izany, tsara kokoa noho ny 200 ny dimy. Nentiny tany amin'ilay trano izahay. Tsy nahita olona aho teny an-dàlana fa tsapako fa efa fantatry ny olona ny fahatongavanay. Miha-matoky isanandro isanandro aho. Nampiako ireo mpiray efitra tamiko rehefa te-ho any amin'ny dokotera na mpitsabo nify. Tamin'ny voalohany dia menatra aho hiresaka amin'ny Alemàna. Saingy na aiza na aiza alehako dia tsikitsiky no hitako.
“Tsapako fa mitsikitsiky aminay ny olona rehetra eto, fa izahay no tsy mitsiky. Ohatra ny adinonay ny fomba fanao. Toa tsy sakafo, na vola, na firenena hamonjy no ilaiko nony farany. Ny hany zavatra ilaiko dia tsikitsiky tsy mihatsaravelatsihy.”
Indray andro, nisy mpiasa an-tsitrapo tonga tao aminay mba hanampy anay amin'ny zavatra rehetra. Mampianatra Alemàna anay izy ary Migy no iantsoanay azy. Reniko alemàna no iantsoako azy ao am-poko. Tokony hanao zavatra be dia be aminy aho. Tsapako fa mitsikitsiky aminay ny olona rehetra aty, fa izahay no tsy mitsiky. Toa adinonay ny fomba fanao. Ohatra ny tsy mila sakafo, na vola, na firenena mpamonjy aho ny farany. Ny hany zavatra ilaiko dia tsikitsiky tsy mihatsaravelatsihy.
10 volana niandrasana aty aoriana, voaraiko ny karatra fahazoandàlana honina. Afaka mijanona telo taona mba hiasa sy hianatra aho. Tsy maintsy mbola manatsara ny fahaizako alemàna aho.
Lavitra ny làlana ho amin'ny hoavy. Tsy mahatsiaro ho osa intsony aho, na dia mahatsiaro marary aza isaky ny mandre vaovao. Izahay no mahatonga ny olana aty Eoropa. Mampalahelo ahy rehefa mahita antoko Politika mahazo tombony sy mahazo vahana noho ny aminay. Marobe izahay rehefa jerena amin'ny fahitalavitra. Lazaina fa tsy ampy fanabeazana ny ankamaroanay. Na mahery fihetsika izahay. Izany no tsy maintsy ekenay noho ny zavamisy any Syria.
Fa olombelona manana nofinofy goavana aho. Hiasa mafy aho mba hanaporofoana fa diso izany.